Ny asany sy ny famonoana ny mpanatanteraka: fifandraisana inona? - Fiofanana kognitif
Ianao izao: Home » Ho an'ny matihanina » Articles » Ny asany sy ny famonoan'olona: asa inona?
Imbetsaka izahay no niresaka asan'ny mpanatanteraka sy azy ireo zava-dehibe amin'ny fianarana any an-tsekoly. Niresaka momba ny mety ho mety hampiarahana azy ireo ihany koa izahay aorian'ny ratra amin'ny atidoha nahazo na ao amin'ny tontolo fianarana.
Taloha, ny manam-pahaizana sasany dia nampisaraka ny fiasan'ny mpanatanteraka ho faritra roa makro: ny hetsika "mangatsiaka" ary ny asa entin'ny "mafana".: raha ny tranga voalohany dia ireo singa ireo mifandraika kokoa amin'ny fanodinana ny vaovao amin'ny ambaratonga abstract (ohatra, fahatsiarovana ny fiasa, ny fampiatoana, ny fahafaha-mandanjalanja sy ny drafitra), raha ny tranga faharoa kosa dia manondro ny fahaizana havana. fifehezana ara-pihetseham-po sy fitondran-tena (ohatra, ny fahafahana hampiato fahafaham-po sy fitantanana ny fihetseham-po).
Raha miresaka momba ny fiasan'ny mpanatanteraka mafana, amin'ny alàlan'ny famaritana, dia voajanahary ny mieritreritra ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fitondran-tena mahery setra, indrindra amin'ny tsy ampy ireo. Andiana mpikaroka Alemana fa nieritreritra ny hanadihady ny fifandraisan'ny olona izy asan'ny mpanatanteraka hatsiaka ary isan-karazany ny fihetsika feno herisetra.
Raha ny tokony ho izy manokana dia nanara-maso andian-jaton'ny ankizy ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany nandritra ny telo taona izy ireo, voalohany nanombantombana ny fizotran'izy ireoinhibition, la fitadidiana miasa, la fahaizana mizaha toetra ary ny fahaizana planning. Nandritra ny telo taona, ny mpampianatra ny zaza dia nasaina nanombatombana ny fihetsika feno herisetra tamin'ny fizarazarana azy ireo:
herisetra reactive (ho valin'ny fihantsiana)
herisetra tompon'andraikitra voalohany (ny fihetsika mahery vaika efa nomanina, tsy vokatry ny fihantsiana)
Amin'ny famakafakana ireo angon-dron'ireo mpikaroka dia nahita izany arakaraka ny tsy fahampian'ny asan'ny mpanatanteraka mangatsiaka, noheverina ny fihetsika mahery vaika kokoa, na ara-batana na ara-tsaina. Ireo fanafihana ireo, mifandraika amin'ny tsy fisian'ny fiasan'ny mpanatanteraka, na izany aza anefa dia hita maso ihany ary tsy mavitrika.
maninona ity "anomaly" ity?
Araka ny filazan'ny mpikaroka, ny fihetsika mihetsika dia miankina amin'ny tsy fahaizana mifehy ny tsimokaretina ary raha ny heviny dia hanana fifandraisana amin'ny tsy fahampian'ny asan'ny mpanatanteraka; Ny fanafihana tsy ampoizina kosa dia mitaky ny drafitra ary noho izany dia sarotra kokoa ny manatanteraka tsy misy fahombiazan'ny asan'ny mpanatanteraka.
Avy amin'ireo vokatra ireo dia azo antoka fa mitaky ny fandalinana raha ny fiofanana ara-tsaina mikendry ny hanamafisana ny asan'ny mpanatanteraka dia mety hitarika fifehezana bebe kokoa amin'ny fihetseham-po sy ny valin-kafatra mety hitranga, ka hitarika ny fihenan'ny fitondrantena mahery vaika.
TOL - Tilikambon'i London: ny fandinihana
ny fomba manombatombana ny asan'ny mpanatanteraka: ireo fitsapana ampiasaina
FE-PS 2-6: Vatolampy ho an'ny fanombanana ny fiasan'ny mpanatanteraka sekoly
Rohlf, HL, Holl, AK, Kirsch, F., Krahé, B., & Elsner, B. (2018). Fifandraisana lava eo amin'ny fiasan'ny mpanatanteraka, ny hatezerana ary ny herisetra amin'ny fahazazana. Mpiambina amin'ny aretin-tsaina manavakavaka, 12, 27.
Séguin, JR, Arseneault, L., & Tremblay, RE (2007). Ny fandraisana anjaran'ny singa "cool" sy "mafana" amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fahatanorana: Misy fiantraikany amin'ny psychopathology fampandrosoana. Fivoarana kognitif, 22(4), 530-543.
herisetra, asan'ny mpanatanteraka, asan'ny mpanatanteraka sy ny herisetra
Ny asany sy ny famonoan'olona: asa inona?2018-04-052020-02-23http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2018/04/cortex-prefrontal.png200px200px
Mahatonga anao ho hendry kokoa ve ny fandinihana mozika?Ireo lahatsoratra, lahatsoratra, kilema manokana nianatra manokana (DSA), DSA, Fampiasa ho an'ny Mpanatanteraka, Fahakinganan-tsaina, Neuropsychology
Azo atao ve ny manatsara ny famoronana olona iray?Fianarana, lahatsoratra, lahatsoratra, Fahaiza-miaina, Neuropsychology